MicroLED ဆိုတာဘာလဲ? Apple က ဒီနည်းပညာကိုသုံးချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက? – DigitalTimes.com.mm
1487 Shares 655 Views
ဒီရက်ပိုင်းကပဲ Apple က ကိုယ်တိုင် display တွေထုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းက တော်တော်လေးဟော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတာက သူများတွေထုတ်သလို OLED, LED-backlit LCD တွေမဟုတ်ဘဲ တောက်ပမှု၊ အရောင်တိကျမှု၊ တာရှည်ခံနိုင်မှုအားလုံးမှာ အားသာတဲ့နည်းပညာသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ microLED display တွေထုတ်လုပ်မှာပါ။
လက်ရှိမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေထုတ်လုပ်မှုမှာ လွှမ်းမိုးထားနေဆဲကတော့ LCD display တွေပါ။ သူတို့ကို အလင်းထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ light-emitting-diode(LED) တွေက အနောက်ကနေအလင်းထောက်ပံ့ပေးနေရပါတယ်။ ပုံတစ်ပုံထွက်လာဖို့အတွက် ခုနက အလင်းထုတ်ပေးတဲ့ diode တွေကနေ polarizers, liquid crystal, color filters, နဲ့ တခြားတခြားသော အလွှာများစွာကိုဖြတ်ပြီးမှ နောက်ခံအလင်းကိုထုတ်ပေးပါတယ်။
LCD တွေနဲ့မတူတာက OLED (organic light-emitting diode) panel တွေက ပုံတစ်ပုံပြဖို့အတွက် ဒီလိုနောက်ခံအလင်းဘာညာမလိုပါဘူး။ သူတို့မှာ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကိုလိုက်ပြီး အလင်းရောင်ကိုထုတ်ပေးနိုင်မယ့် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းတစ်လွှာရှိပါတယ်။ သူက pixel တစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက် အလင်းထုတ်ပေးတာဖြစ်လို့ LCD တွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် အရောင်သိပ်သည်းဆပိုကောင်းပါတယ်။ LED နောက်ခံအလင်းတွေကကျတော့ တစ်ချိန်လုံးတပြေးညီအလင်းထုတ်ပေးရတာဖြစ်လို့ အနက်ရောင်ဆိုရင်တောင် နောက်ခံအလင်းကြောင့် လုံးဝနက်မှောင်နေတဲ့အနက်ရောင်မျိုးမရနိုင်ပါဘူး။
OLED panel တွေကတော့ အလင်းထုတ်ပေးရမယ့် pixel အကွက်တွေကိုပဲ လိုအပ်မှအလင်းထုတ်လွှတ်ပေးတာဖြစ်ပြီး မလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေ ဥပမာအနက်ရောင်ပြရမယ့် pixel အကွက်တွေဆို အလင်းမလွှတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အနက်ရောင်ဆိုလည်းလုံးဝနက်မှောင်တဲ့ အနက်ရောင်မျိုး OLED တွေက ပြပေးနိုင်တာပါ။ နောက်ခံအလင်းပေးဖို့အလွှာတွေလည်းမလိုတော့ LCD တွေထက်လည်း ပိုပါးသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဖုန်းတွေကိုပါးသထက်ပါးလာအောင်ပြောင်းလဲလာကြတဲ့ ဒီခေတ်မှာ OLED တွေက ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်နေတာပါ။
ဒါဆို MicroLED တွေကတော့ ဘာအားသာသလဲ? သူလည်း OLED တွေလိုပဲ နောက်ခံအလင်းထုတ်ပေးစရာမလိုဘဲ LED သေးသေးလေးတစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။ LED သေးသေးလေးတစ်ခုချင်းစီမှာ sub-pixel ၃ခုပါပြီး တစ်ခုချင်းစီကနေ အလင်းလွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ pixel တစ်ကွက်ချင်းစီကနေ အလင်းလွှတ်ပေးတာကြောင့် OLED တွေလိုပဲ အနက်ရောင်ဆိုနက်မှောင်တဲ့အနက်ရောင်အတိုင်းရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် OLED တွေထက်ကို အားသာတဲ့ ၂ချက်ရှိပါသေးတယ်။ ပထမတစ်ချက်က OLED တွေမှာသုံးတဲ့ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းတွေကိုမသုံးဘဲ inorganic ဒြပ်ပေါင်းတွေကိုသုံးတာပါ။ သဘောက OLED display တွေလို အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ ယိုယွင်းလာတာ အရောင်တောက်ပမှုအားလျော့လျော့လာတာမျိုးတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ microLED display တွေမှာသုံးတဲ့ အင်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းကတော့ Gallium Nitrade (GaN) ဖြစ်ပြီး တာရှည်ခံတဲ့အာားချက်အပြင် အလင်းတောက်ပမှုအားကလည်း OLED တွေထက်ကို ၃၀ဆ ပိုတောက်ပနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် OLED display တွေလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ screen burn-in ပြဿနာမျိုး microLED display တွေမှာ တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
microLED တွေ ဒီလောက်အားသာချက်တွေရှိနေတာတောင်မှာ ဘာလို့အရင် display နည်းပညာတွေကိုပဲဆက်သုံးနေသေးတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလာပါပြီ။ တခြားပေါ်ကာစနည်းပညာတွေလိုပဲ သူ့ကိုအများအပြားမသုံးနိုင်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းက ငွေ ကြောင့်ပါပဲ။ microLED ဆိုတာက လုံးဝအသစ်စက်စက်နည်းပညာမဟုတ်ပေမယ့်လည်း ခုချိန်ထိကို ထုတ်လုပ်ဖို့အရမ်းခက်ခဲပြီး အ၇မ်းဈေးကြီးနေပါသေးတယ်။ ၂၀၁၄ တုန်းက Apple က microLED တွေကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့ LuxVue ကုမ္ပဏီကိုဝယ်လိုက်ပြီး နောက်၎နှစ်အကြာ ဒီ ၂၀၁၈ မှာ ဒီနည်းပညာကိုသုံးဖို့စကြိုးစားလာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ် iPhone တွေ နောက်နှစ် iPhoneွေအတွက် microLED display တွေသုံးလာမယ့်မျှော်လင့်ချက်က ဝေးပါသေးတယ်။
ခုချိန် Apple က microLED display တွေသုံးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ပစ္စည်းကတော့ Apple Watch တွေပါ။ သူတို့တွေအတွက်က display က သေးသေးနဲ့ resolution နည်းနည်းပဲလိုတဲ့အပြင် အများအပြားထုတ်လုပ်ဖို့လည်း လွယ်ကူတဲ့အတွက် ဒီမှာစသုံးဖို့စဉ်းစားလိုက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ microLED display တွေမှာပြဿနာက တစ်ကြိမ်မှာ sub-pixel တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုပေါင်းပေးရတာပါ။ 1080p display တစ်ခုမှာ pixel ပေါင်း ၂.၁သန်းလောက်ရှိတဲ့အတွက် 1 pixel မှာ3sub-pixel ရှိတယ်ဆိုရင် sub-pixel စုစုပေါင်းကိုက ၆.၃သန်းရှိနေပါပြီ။ ပုံတစ်ပုံပြဖို့ ဒီ sub-pixel တိုင်းက တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပေါင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့လောက် pixel အများကြီးနဲ့ microLED panel တစ်ခုထုတ်ဖို့က တကယ်တော့မလွယ်လွန်းပါဘူး။
မလွယ်ကူပေမယ့်လည်း LCD တွေ OLED တွေထက်ပိုအားသာချက်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့် Apple ကထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတာပါ။ လက်ရှိ iPhone X တွေမှာသုံးထားတဲ့ OLED display တွေကလည်း Samsung ဆီကနေအဓိကယူနေရတာဖြစ်ပြီး လာမယ့် ၂၀၁၈ iPhone တွေမှာလည်း LG နဲ့ Samsung တို့ရဲ့ display တွေကိုသုံးရဦးမှာပါ။
ဒီတော့ microLED နည်းပညာကို Apple Watch တွေမှာစသုံး နောက်ပိုင်းအများအပြားထုတ်လာနိုင်ချိန်ကျမှ iPhone တွေအတွက် ထုတ်လာမယ့်သဘောမှာပါ။ microLED မှာခြေချလာတာ Apple တင်မဟုတ်ဘဲ Samsung လည်းပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ 146-inch The Wall ဆိုတဲ့ microLED TV ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပေမယ့် ဈေးကတော့ ခေါင်ခိုက်နေဆဲပါပဲ။ တော်တော်များများမသုံးနိုင်လောက်တဲ့ဈေးပမာဏဆိုရင် show ပြရုံသက်သက်ပဲဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ Samsung နဲ့မတူတဲ့ Apple ရဲ့အတွေးက သေးသေးလေးကနေ ခြေလှမ်းစ သုံးစွဲသူတွေကို ဒီနည်းပညာနဲ့ထိတွေ့စေပြီးမှ နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေ device အကြီးတွေဖက်ကိုခြေဦးလှည့်မှာပါ။ နောက်နှစ်လောက်ဆိုရင် Apple Watch တွေမှာ microLED display တွေသုံးလာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်၂နှစ်၃နှစ်လောက်နေရင်တော့ microLED iPhone တွေကို တွေ့မြင်လာရနိုင်ချေများပါတယ်။
ဒီရကျပိုငျးကပဲ Apple က ကိုယျတိုငျ display တှထေုတျတော့မယျဆိုတဲ့သတငျးက တျောတျောလေးဟော့ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ထူးဆနျးတာက သူမြားတှထေုတျသလို OLED, LED-backlit LCD တှမေဟုတျဘဲ တောကျပမှု၊ အရောငျတိကမြှု၊ တာရှညျခံနိုငျမှုအားလုံးမှာ အားသာတဲ့နညျးပညာသဈတဈခုဖွဈတဲ့ microLED display တှထေုတျလုပျမှာပါ။
လကျရှိမိုဘိုငျးလျဖုနျးတှထေုတျလုပျမှုမှာ လှမျးမိုးထားနဆေဲကတော့ LCD display တှပေါ။ သူတို့ကို အလငျးထုတျလှတျပေးတဲ့ light-emitting-diode(LED) တှကေ အနောကျကနအေလငျးထောကျပံ့ပေးနရေပါတယျ။ ပုံတဈပုံထှကျလာဖို့အတှကျ ခုနက အလငျးထုတျပေးတဲ့ diode တှကေနေ polarizers, liquid crystal, color filters, နဲ့ တခွားတခွားသော အလှာမြားစှာကိုဖွတျပွီးမှ နောကျခံအလငျးကိုထုတျပေးပါတယျ။
LCD တှနေဲ့မတူတာက OLED (organic light-emitting diode) panel တှကေ ပုံတဈပုံပွဖို့အတှကျ ဒီလိုနောကျခံအလငျးဘာညာမလိုပါဘူး။ သူတို့မှာ လြှပျစဈစီးကွောငျးကိုလိုကျပွီး အလငျးရောငျကိုထုတျပေးနိုငျမယျ့ အျောဂဲနဈဒွပျပေါငျးတဈလှာရှိပါတယျ။ သူက pixel တဈခုခငျြးစီတိုငျးအတှကျ အလငျးထုတျပေးတာဖွဈလို့ LCD တှနေဲ့ယှဉျလိုကျရငျ အရောငျသိပျသညျးဆပိုကောငျးပါတယျ။ LED နောကျခံအလငျးတှကေကတြော့ တဈခြိနျလုံးတပွေးညီအလငျးထုတျပေးရတာဖွဈလို့ အနကျရောငျဆိုရငျတောငျ နောကျခံအလငျးကွောငျ့ လုံးဝနကျမှောငျနတေဲ့အနကျရောငျမြိုးမရနိုငျပါဘူး။
OLED panel တှကေတော့ အလငျးထုတျပေးရမယျ့ pixel အကှကျတှကေိုပဲ လိုအပျမှအလငျးထုတျလှတျပေးတာဖွဈပွီး မလိုအပျတဲ့အပိုငျးတှေ ဥပမာအနကျရောငျပွရမယျ့ pixel အကှကျတှဆေို အလငျးမလှတျတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အနကျရောငျဆိုလညျးလုံးဝနကျမှောငျတဲ့ အနကျရောငျမြိုး OLED တှကေ ပွပေးနိုငျတာပါ။ နောကျခံအလငျးပေးဖို့အလှာတှလေညျးမလိုတော့ LCD တှထေကျလညျး ပိုပါးသှားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဖုနျးတှကေိုပါးသထကျပါးလာအောငျပွောငျးလဲလာကွတဲ့ ဒီခတျေမှာ OLED တှကေ ကုမ်ပဏီတှရေဲ့ပဈမှတျဖွဈနတောပါ။
ဒါဆို MicroLED တှကေတော့ ဘာအားသာသလဲ? သူလညျး OLED တှလေိုပဲ နောကျခံအလငျးထုတျပေးစရာမလိုဘဲ LED သေးသေးလေးတဈခုခငျြးစီပျေါမှာ အခွခေံထားပါတယျ။ LED သေးသေးလေးတဈခုခငျြးစီမှာ sub-pixel ၃ခုပါပွီး တဈခုခငျြးစီကနေ အလငျးလှတျပေးနိုငျပါတယျ။ pixel တဈကှကျခငျြးစီကနေ အလငျးလှတျပေးတာကွောငျ့ OLED တှလေိုပဲ အနကျရောငျဆိုနကျမှောငျတဲ့အနကျရောငျအတိုငျးရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ OLED တှထေကျကို အားသာတဲ့ ၂ခကျြရှိပါသေးတယျ။ ပထမတဈခကျြက OLED တှမှောသုံးတဲ့ အျောဂဲနဈဒွပျပေါငျးတှကေိုမသုံးဘဲ inorganic ဒွပျပေါငျးတှကေိုသုံးတာပါ။ သဘောက OLED display တှလေို အခြိနျကွာလာတဲ့အခါ ယိုယှငျးလာတာ အရောငျတောကျပမှုအားလြော့လြော့လာတာမြိုးတှေ မရှိတော့ပါဘူး။ microLED display တှမှောသုံးတဲ့ အငျအျောဂဲနဈဒွပျပေါငျးကတော့ Gallium Nitrade (GaN) ဖွဈပွီး တာရှညျခံတဲ့အာားခကျြအပွငျ အလငျးတောကျပမှုအားကလညျး OLED တှထေကျကို ၃၀ဆ ပိုတောကျပနိုငျပါတယျ။ ဒီအတှကျ OLED display တှလေကျရှိကွုံတှနေ့ရေတဲ့ screen burn-in ပွဿနာမြိုး microLED display တှမှော တှရေ့မှာမဟုတျပါဘူး။
microLED တှေ ဒီလောကျအားသာခကျြတှရှေိနတောတောငျမှာ ဘာလို့အရငျ display နညျးပညာတှကေိုပဲဆကျသုံးနသေေးတာလဲဆိုတဲ့မေးခှနျးလာပါပွီ။ တခွားပျေါကာစနညျးပညာတှလေိုပဲ သူ့ကိုအမြားအပွားမသုံးနိုငျကွတဲ့အကွောငျးရငျးက ငှေ ကွောငျ့ပါပဲ။ microLED ဆိုတာက လုံးဝအသဈစကျစကျနညျးပညာမဟုတျပမေယျ့လညျး ခုခြိနျထိကို ထုတျလုပျဖို့အရမျးခကျခဲပွီး အ၇မျးဈေးကွီးနပေါသေးတယျ။ ၂၀၁၄ တုနျးက Apple က microLED တှကေိုထုတျလုပျနတေဲ့ LuxVue ကုမ်ပဏီကိုဝယျလိုကျပွီး နောကျ၎နှဈအကွာ ဒီ ၂၀၁၈ မှာ ဒီနညျးပညာကိုသုံးဖို့စကွိုးစားလာပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနှဈ iPhone တှေ နောကျနှဈ iPhoneှေအတှကျ microLED display တှသေုံးလာမယျ့မြှျောလငျ့ခကျြက ဝေးပါသေးတယျ။
ခုခြိနျ Apple က microLED display တှသေုံးဖို့စဉျးစားနတေဲ့ပစ်စညျးကတော့ Apple Watch တှပေါ။ သူတို့တှအေတှကျက display က သေးသေးနဲ့ resolution နညျးနညျးပဲလိုတဲ့အပွငျ အမြားအပွားထုတျလုပျဖို့လညျး လှယျကူတဲ့အတှကျ ဒီမှာစသုံးဖို့စဉျးစားလိုကျတာဖွဈနိုငျပါတယျ။ microLED display တှမှောပွဿနာက တဈကွိမျမှာ sub-pixel တဈခုခငျြးစီတိုငျးကိုပေါငျးပေးရတာပါ။ 1080p display တဈခုမှာ pixel ပေါငျး ၂.၁သနျးလောကျရှိတဲ့အတှကျ 1 pixel မှာ3sub-pixel ရှိတယျဆိုရငျ sub-pixel စုစုပေါငျးကိုက ၆.၃သနျးရှိနပေါပွီ။ ပုံတဈပုံပွဖို့ ဒီ sub-pixel တိုငျးက တဈခုခငျြးစီလိုကျပေါငျးရတာဖွဈတဲ့အတှကျ အဲ့လောကျ pixel အမြားကွီးနဲ့ microLED panel တဈခုထုတျဖို့က တကယျတော့မလှယျလှနျးပါဘူး။
မလှယျကူပမေယျ့လညျး LCD တှေ OLED တှထေကျပိုအားသာခကျြတှမြေားတဲ့အတှကျကွောငျ့ Apple ကထုတျဖို့စဉျးစားနတောပါ။ လကျရှိ iPhone X တှမှောသုံးထားတဲ့ OLED display တှကေလညျး Samsung ဆီကနအေဓိကယူနရေတာဖွဈပွီး လာမယျ့ ၂၀၁၈ iPhone တှမှောလညျး LG နဲ့ Samsung တို့ရဲ့ display တှကေိုသုံးရဦးမှာပါ။
ဒီတော့ microLED နညျးပညာကို Apple Watch တှမှောစသုံး နောကျပိုငျးအမြားအပွားထုတျလာနိုငျခြိနျကမြှ iPhone တှအေတှကျ ထုတျလာမယျ့သဘောမှာပါ။ microLED မှာခွခေလြာတာ Apple တငျမဟုတျဘဲ Samsung လညျးပါဝငျခဲ့ပါသေးတယျ။ 146-inch The Wall ဆိုတဲ့ microLED TV ကိုမိတျဆကျလိုကျပမေယျ့ ဈေးကတော့ ခေါငျခိုကျနဆေဲပါပဲ။ တျောတျောမြားမြားမသုံးနိုငျလောကျတဲ့ဈေးပမာဏဆိုရငျ show ပွရုံသကျသကျပဲဖွဈနမှောပါ။ ဒီနရောမှာ Samsung နဲ့မတူတဲ့ Apple ရဲ့အတှေးက သေးသေးလေးကနေ ခွလှေမျးစ သုံးစှဲသူတှကေို ဒီနညျးပညာနဲ့ထိတှစေ့ပွေီးမှ နောကျပိုငျးဖုနျးတှေ device အကွီးတှဖေကျကိုခွဦေးလှညျ့မှာပါ။ နောကျနှဈလောကျဆိုရငျ Apple Watch တှမှော microLED display တှသေုံးလာနိုငျတော့မှာဖွဈပွီး နောကျထပျ၂နှဈ၃နှဈလောကျနရေငျတော့ microLED iPhone တှကေို တှမွေ့ငျလာရနိုငျခမြေားပါတယျ။